घरेलू विशेषताहरु (अझै सम्म यो निवास को विशेषता भनिन्छ), नियम, अवस्थामा जहाँ यो guardianship वा वकिल अनुरोध गरिएको छ मा बनाइने। सामान्यतया, यस्तो कागजात स्थापना, ग्रहण लागि आवश्यक छ बच्चा जिम्मा वा झ्यालखानाबाट ससर्त जारी। कुनै पनि रूप मा यो विशेषता लेखन। यो तपाईं को वर्णन गर्न चाहनुहुन्छ कि एक व्यक्ति संग बस्ने ती हुनुपर्छ। अधिक छिमेकी एक कागज, राम्रो साइन इन गर्न: यो उल्लेख गर्नुपर्छ माथिको अवस्थामा निर्णय गर्दा हस्ताक्षर संख्या कागजात को वैधता असर छ। कसरी आकर्षित र प्रतिक्रिया जारी गर्न?
पहिले, यो छिमेकी छल्न र सामाजिक र घरेलू विशेषताहरु आवश्यक किन व्याख्या गर्न अग्रिम आवश्यक छ। यो मान्छे पाठ कागजात सदस्यता संग समन्वय आफ्नो नाम र नाम, सही ठेगाना लेख्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, सुविधा प्रकाशित गर्दा, तिनीहरू मात्र विशेष डिजाइन ठाउँमा साइन इन गर्न आवश्यक हुनेछ।
दोस्रो, प्रतिक्रिया सामान्यतया एक मनपरी ढंगमा लेखिएको छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यसलाई चित्रकला छ जब यो राम्रो एक निश्चित नमुना पछ्याउनुपर्छ छ। शीर्षक सामान्यतया सबै विवरण कागजात, नाम र थर, निवास ठेगाना को प्रकार संकेत गर्छ।
तेस्रो, छिमेकी देखि घरेलू प्रतिक्रिया यस्तो मिति र जन्म, शिक्षा ठाउँमा व्यक्तिगत डेटा समावेश हुन सक्छ, एक डिग्री, काम अनुभव प्राप्त। कहिलेकाहीं यो नागरिक यस ठेगानामा के वर्ष बसोबास संकेत गर्छ। तपाईं पनि परिवारका सदस्य र आफ्नो उमेर को संरचना वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ।
सामान्यतया वाक्यांश थप लेखिएको छ: "छरछिमेकी अनुसार ..." आफ्नो हस्ताक्षर विशेषता अन्तर्गत छोड्न सहमत भएका मानिसहरूको सूची द्वारा पछि लागे। माथि उल्लेख, तपाईँ नाम, यसको छिमेकी प्रत्येक ठेगाना निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ।
स्वाभाविक, घरेलू विशेषताहरु सधैं सकारात्मक हुनेछ। यो जानकारी आफ्नो हस्ताक्षर बाँकी सबै, साथै कागजात पाठ अप चित्रकला मा संलग्न छन् गर्नेहरूलाई ल्याइनेछ जिम्मेवार को slightest अन्तर को मामला मा जस्तै, विश्वसनीय छ कि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एक नागरिक जीवित मानिसहरूको संख्या को भाग मा उजुरी छ भने, यो (पाठ्यक्रम, यो थियो भने,) को तथ्य, तिनीहरूलाई घृणा उत्पन्न गर्न आफ्नो छिमेकी संग स्थापित सम्बन्ध वर्णन गर्न, छात्रावास को मान्यता संग रक्सी वा लागूपदार्थ, अनुपालन वा गैर-अनुपालन को दुरुपयोग आवश्यक छ। हामी यस्तो सामाजिक गतिविधिहरु, यार्ड वा घर को सुधार गर्न निर्देशित रूपमा सकारात्मक पक्षहरू, भूल हुँदैन। कुनै पनि सकारात्मक जानकारी, साथै नकारात्मक रूपमा, विस्तार मा घरेलू विशेषता वर्णन हुनुपर्छ।
निस्सन्देह, पछिल्लो कदम को एक हस्ताक्षर सङ्कलन हुनेछ। प्रतिक्रिया सूचीबद्ध सबै ती साइन इन गर्न केही समय जाँच। घरेलू विशेषताहरु आवास विभाग कर्मचारीहरु वा homeowners द्वारा प्रमाणित हुनुपर्छ। नियम, यो कागजात जिल्ला निरीक्षक, हस्ताक्षर र छाप कागजात सामग्री र वास्तविकता त्यसको सान्दर्भिकता को प्रामाणिकता साबित हुनेछ भन्ने द्वारा प्रमाणित छ।
प्रसूति राजधानी। जब तपाईं अभिभावक राजधानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
म पर्यवेक्षण किन चाहिन्छ
दहनशील ग्याँसहरु: नाम, गुण र आवेदन
पुरातन मिश्री पौराणिक कथाहरु सेत र देवताहरूको आफ्नो विरोध
लुगा धुने मेसिन लागि पम्प: मरम्मत को कार्यान्वयन
छेद ओठ: को उपस्थिति र उपचार को विशेषताहरु
पूरा Predchistovaya - यो के हो? फोटो Predchistovaya अपार्टमेन्ट खत्म
एयरलाइन "मेरिडियन": छिटो, सम्पर्क जानकारी, यात्रु समीक्षा
Ludmila Sokolova: जीवनी Cinderella